Taliyihii Booliiska Gobolka Hiiraan oo Lagu Dilay Dagaal Dhax Maray Ciidamo Kala Taabacsan…
Tuesday June 11, 2019 - 17:06:05 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi maanta ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamo kala taabacsan Gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed iyo Gudoomiyaha cusub.
Dagaalka ayaa la sheegay in uu ahaa mid xoogan oo la isku adeegsanayay hubka nuucyadiisa kala duwan, waxa uuna dagaalka ka dhacay deegaanka Kala beer ee kuyaala duleedka Baladweyne.
Dagaalkan ayaa sigaar ah waxaa uu uga socdaa deegaanka lagu magacaabo kala Beyr oo ku yaalla duleedka Magaalada Balaweyne,isla markaana waxaa lagu soo warayaa in uu yahay mid cusub oo lagu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan.
Sida aan wararka ku helnay dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac , waxaana dadka ku dhintay dagaalka ku jira taliyihii qeybta Booliska gobolka Hiiraan Gaashaanle Dhexe Maxamed Mocow.
Dagaalka ayaa sidoo kale waxaa dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray saraakiil katirsan ciidanka booliiska iyo kuwa daacada u ah Yuusuf Dabageed, waxaana wali magaalada Baladweyne iyo duleedkeeda ka jira xiisad dagaal.
Madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa dhawaan xilka ka qaaday Gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo isna ka hor yimid xil ka qaadistaasi, dagaalkan ayaana daba socda xiisada ka dhalatay xil ka qaadista.
Xaalada deegaanka kala Beyr ee duleedka Magaalada Baladweyne uu dagaalka ka socdo ayaa waxa ay tahay mid kacsan,waxaana halkaasi laga maqlayaa dhawqa rasaas xoogan.